Ungayidlala kanjani iRoblox kuChannelbook? - Ukudlala
Ukusuka ku-Windows kuye ku-Chromebook kungahle kuphazamise njengoba ungeke ukwazi ukudlala imidlalo yakho oyithandayo njengoba ubuvame ukwenza. Lokhu kungakuvimbela ekudlaleni umdlalo wethu owuthandayo njengoRoblox, akunjalo?Uma impendulo yakho inguyebo, ngakho-ke ungakhathazeki namuhla sishilo isixazululo sokugcina kulokhu okuthunyelwe okuzokuchazela ukuthi ungadlala kanjani iRoblox ku-Chromebook. Izinyathelo ezishiwo ziqondile futhi ngeke zithathe isikhathi esiningi.Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka ngokufanele sibone ukuthi ungadlala kanjani iRoblox ku-Chromebook.
Ungadlala iRoblox ku-Chromebook?
Kube nokungaqondakali okuningi mayelana nokuthi ungadlala imidlalo yakho eyintandokazi ye-Android ku-Chromebook noma cha. Manje sesizowamukela lo mbuzo manje. Kepha uma kufanele siphendule lo mbuzo kungaba ukuthi uyakwazi yini ukudlala iRoblox kuChannelbook kungaba ngu-'Yebo '.
Ngokuthuthuka okukhulu kwezobuchwepheshe bokudlala nokulingisa, izinto zishintshe kakhulu kubadlali bamageyimu, futhi manje sesiyakwazi ukudlala imidlalo ye-Android efana neRoblox kuChannelbook kalula. URoblox ngumdlalo womshini wokugijima we-Android ongadlalwa ku-Chromebook ngendlela efanayo njengoba uzodlala kudivayisi ye-Android. Sishilo ngezinyathelo ezilula ukuthi uma uzilandela, ubungeke ukwazi ukudlala iRoblox kuphela kepha noma yimuphi umdlalo we-Android.
Izindlela ezihamba phambili zokudlala iRoblox ku-Chromebook:
Indlela # 1: Kusuka ku-Google Play Isitolo:
Indlela elula yokulanda i-Roblox ku-Chromebook ukuyilanda kusuka ku-Google Play Isitolo se-Chromebook yakho. Nazi ezinye zezinyathelo zokulanda iRoblox ku-Google Play Isitolo.
Qalisa I-Google Play Isitolo ku-Chromebook yakho bese useshe u-'Roblox 'kubha yokusesha.
Lapho usuthole ukuchofoza kuRoblox kuyo, futhi izofakwa kudivayisi yakho.
QAPHELA:Le ndlela yokulanda i-Roblox izosebenza kuphela uma i-Chromebook yakho inokuhambisana ne-Google Play Isitolo. Amanye amamodeli amadala e-Chromebook awasekeli i-Play Store, futhi ngeke uyithole uma uyifuna. Kepha lokhu kuvinjelwa komgwaqo kungabhekwana nakho uma ulandela lezi zinyathelo ezibalulwe.
Iya kuzilungiselelo kudivayisi yakho, chofoza inketho yezinhlelo zokusebenza ngakwesokunxele bese unika amandla i-Google Play Isitolo.
Vakashela i-Google Play Isitolo kusuka kuwebhu noma chofoza lapha . Uzoqondiswa ekhasini lapho ungafaka khona iRoblox kudivayisi yakho. Chofoza ku-Faka ukuyilanda kudivayisi yakho.
Lapho iRoblox isifakiwe, ungayethula kusuka ekhabetheni lohlelo lokusebenza bese uyidlala njengochwepheshe. Izosekela nokhiye ojwayelekile we-WASD nokuguqulwa kwegundane.
Indlela # 2: Ukufaka iRoblox nge-ARC Welder
Kulezi zinsuku i-Google Play Isitolo iyaphoqeleka kuyo yonke i-Chromebook oyibukayo, kepha ezinye izinhlobo ezindala aziyithokozi i-Google Play Isitolo, ngakho-ke ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Android kuba ngumsebenzi onzima. Ngakho-ke, uma ngabe idivayisi yakho ingenye yazo, ungakhathazeki, sisho indlela elula yokusebenzisa iRoblox ngosizo lwe-ARC Welder.
Kuyini i-ARC Welder?
I-ARC Welder uhlelo lokusebenza oluphendulela uhlelo lwakho lokusebenza lwe-Androidkuhlelo lokusebenza lwe-Chrome OS. Kodwa-ke, lokhu kungahle kube nezingcwecwe ezincane noma izimbungulu ezilunge ngokuphelele futhi ezingabonakali.Ukulanda i-ARC Welder bese ufaka iRoblox, ungalandela lezi zinyathelo ukuze ungabambeki ndawo.
Landa i-APK yeRoblox ngokuchofoza lapha bese ukhumbula umkhombandlela lapho ugcinwa khona.
Landa isandiso se-ARC Welder ngokuchofoza lapha noma ngokuvakashela i-Google Chrome Extension futhi useshe i-ARC Welder. Usayizi wefayela ucishe ube ngu-200 MB, ngakho-ke yiba nesineke ngenkathi ulilanda.
Ngemuva kokuthi ukufakwa kuphothuliwe, ungavula i-ARC Welder chofoza inkinobho ethi 'Khetha', ezobe ikhona ekhoneni elingezansi kwesokudla.
Uma usuqedile, khetha i-umkhombandlelalapho olande khona i-Roblox APK bese uchofoza kuthebhu ethi ‘Vula’. Uyakhumbula ukuthi awuyithandi i-APK lapha.
Ngemuva kokukhetha umkhombandlela wakho, manje uzocelwa ukuthi ukhethe ifayela lakho le-APK ukuze lihlolwe. Khetha i-APK yakho kusuka enkombeni oyikhethile bese uchofoza ku-'Vula '. Kungathatha isikhathi ukucubungula ifayili.
Uma i-APK yakho isilayishiwe, manje uzocelwa ukuthi ulungiselele izilungiselelo ezimbalwa.Sincoma ukuthi uqinisekise ukuthi i-orientation ikhethwe ku-'Landscape ', i-form factor isethelwe ku-'Thebulethi', i-Resize ikhethelwe ku-'Reconfigure ', futhi i-Clipboard Access ikhethwe ku-' Yebo '.Uma konke lokhu sekumisiwe chofoza ku-‘Vivinya ekhoneni elingezansi kwesokudla.
Uma konke lokhu sekwenziwe, iRoblox izokwethulwa ngokuzenzekelayo, futhi uzokwazi ukudlala iRoblox usebenzisa ukhiye we-WASD negundane langaphandle.
Ngakho-ke lokhu bekuyiposi lethu elifushane nelifushane lokuthi ungafaka kanjani futhi udlale iRoblox ku-Chromebook kalula. Ungazama noma yiziphi kulezi zinyathelo ezimbili ukudlala iRoblox kuChannelbook, futhi siqinisekile ukuthi lokhu okukhulunyiwe kuzoxazulula inkinga yakho futhi kukuvumele ukuthi udlale iRoblox kangcono kakhulu kunakuqala.
Uma ukwazile ukufaka nokudlala iRoblox kuChannelbook ngemuva kokusebenzisa izinyathelo zethu, usazise ebhokisini lokuphawula elingezansi noma uma ubhekene nobunzima zizwe ukhululekile ukusibuza. Sizobuyela kuwe ngesixazululo esisebenzayo ngokushesha okukhulu.
khulula izinsuku ezimbili xbox amakhodi bukhoma
bukela ama-tv wamahhala we-inthanethi abonisa iziqephu ezigcwele
isidlali somculo samahhala esihle kakhulu
uhlelo lokusebenza lomdlali womculo ngaphandle kwezikhangiso
uchungechunge lwe-watch-tv online.net